မြန်မာနိုင်ငံရှိ အသက် ၆ လအောက်ကလေးငယ် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းသာ မိခင်နို့တိုက်ကျွေးမှု ရရှိနေ၊ ကျန်? - Yangon Media Group
မြန်မာနိုင်ငံရှိ အသက် ၆ လအောက်ကလေးငယ် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းသာ မိခင်နို့တိုက်ကျွေးမှု ရရှိနေ၊ ကျန်?
ရန်ကုန်၊ မတ် ၁၃ ၊ မြန်မာနိုင်ငံ တွင် အသက်ခြောက်လအောက် ကလေးငယ် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းသာ မိခင် နို့တစ်မျိုးတည်း တိုက်ကျွေးမှုရရှိနေ ပြီး ကျန်ကလေးငယ် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း မှာ မိခင်နို့အစားထိုးနို့မှုန့်များတိုက် ကျွေးခံနေရကြောင်း Save the Children မှ သိရသည်။
အဆိုပါအကြောင်းနှင့်ပတ် သက်၍ မိခင်နို့တိုက်ကျွေးမှုနှင့် ကလေးနို့မှုန့်လုပ်ငန်းများအား အ စီရင်ခံစာကို မိတ်ဆက်ပွဲနှင့်သတင်း စာရှင်းလင်းပွဲကို မတ် ၁၃ ရက်တွင် ဖိုးစိန်လမ်းရှိ Best Western Green Hill Hotel ၌ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
“ကမ္ဘာမှာ အသက်ခြောက်လ အောက်ကလေးငယ် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း သာ မိခင်နို့တစ်မျိုးတည်းတိုက်ကျွေး ခံနေရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ အသက်ခြောက်လအောက် မြန်မာ ကလေးငယ် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ပဲ မိခင်နို့တစ်မျိုးတည်းကို တိုက်ကျွေး ခံနေရပါတယ်။ များသောအားဖြင့် မိခင်နို့ အစားထိုးနို့မှုန့်တွေ တိုက် ကျွေးတာကိုတွေ့နေရပါတယ်။ Save the Children ရဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ လည်းဖော်ပြထားပါတယ်”ဟု Save the Children ၏ Nutrition Advocacy Advisor ကိုစိုးညီညီက ပြောသည်။
အသက်ခြောက်လအောက် ကလေးငယ်တိုင်းကို မိခင်နို့တစ်မျိုး တည်းသာ တိုက်ကျွေးသင့်ကြောင်း နှင့် မိခင်နို့တိုက်ကျွေးသောကလေး ငယ်သည် ကိုယ်ခံစွမ်းအားကောင်း မွန်ကြောင်း သိရသည်။
“မိခင်နို့တစ်မျိုးတည်းကိုပဲ ကလေးငယ်ခြောက်လအထိကို တိုက် ရမယ်။ ဘာအရည်မှမလိုဘူး၊ နို့မှုန့် မပြောနဲ့ ဘာရေမှတောင်မလိုဘူး။ ခြောက်လအထက်မှာ အစာကျွေး မယ်။ ဖြည့်စွက်စာကို မိခင်နို့နဲ့အတူ အသက်နှစ်နှစ်ကျော်အထိ တိုက်ရ ပါမယ်”ဟု သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ တွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန် ကြီးဌာန၊ အာဟာရဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးနှင့်သုတေသနဌာနခွဲ ညွှန်ကြား ရေးမှူး ဒေါက်တာမေခင်သန်းက ပြောသည်။
ကလေးကို မိခင်နို့မတိုက်ဘဲ အစားထိုးနို့မှုန့်တိုက်ခြင်းဖြင့် အသက် ရှူလမ်းကြောင်းအတွင်း ရောဂါကူး စက်ခံရခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျောဖြစ် ခြင်း၊ ဝက်သက်ဖြစ်ခြင်းတို့ မြင့်တက် လာနိုင်ကြောင်းနှင့် ရေဆိုးစနစ်၊ သန့် ရှင်းသော ရေမရသောနိုင်ငံများတွင် ပိုမိုဖြစ်ပွားနိုင်ကြောင်း Save the Children ၏ အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ယူနီဆက်ဖ်မှ အာဟာရပညာ ရှင် ဒေါက်တာကျော်ဝင်းစိန်က “မိခင် နို့ထဲမှာပါတဲ့ဟာ နို့မှုန့်ထဲမှာထည့် လို့မရတာတွေရှိပါတယ်။ ပထမအ ချက်က မိခင်ရဲ့နို့ရည်က ကိုယ်ခံ စွမ်းအားရှိတယ်။ နို့မှုန့်ထဲမှာ ဒါကို လုံးဝထည့်လို့မရဘူး။ ဒုတိယအချက် က ချစ်ခြင်းမေတ္တာ။ ကလေးနဲ့မိခင် ကြားက ကြည်နူးစရာမေတ္တာ။ အဲဒီ မေတ္တာတရားက နို့မှုန့်ထဲထည့်လို့ မရပါဘူး”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
မိခင်နို့ အစားထိုးနို့မှုန့်များ တိုက်ကျွေးခံနေရမှုများသည် မိခင် များ၏ဗဟုသုတနည်းပါးမှုနှင့် မိခင် နို့ အစားထိုးနို့မှုန့်ထုတ်လုပ်သော ကုမ္ပဏီများ၏ကြော်ငြာအားကောင်း မှုကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။
“မိခင်ကလည်း ဗဟုသုတမရှိ ဘူး။ နို့မှုန့်တိုက်မှ ဥာဏ်ကောင်း မယ်လို့ကြော်ငြာထားတော့ ကလေး ဥာဏ်ကောင်းအောင် တိုက်ချင်ကြ တယ်။ တကယ်တော့ မိခင်နို့တစ် မျိုးတည်းတိုက်တဲ့ကလေးက နို့မှုန့် တိုက်တဲ့ကလေးထက် ဥာဏ်ရည် လေးရာခိုင်နှုန်းကျော် ပိုကောင်း တယ်။ ကိုယ်ခံအားတွေပိုကောင်း တယ်။ ဒါကိုသူတို့မသိကြဘူး။ ဒါ လေးတွေသိစေချင်တယ်”ဟု အာ ဟာရသိပ္ပံပညာပါရဂူ၊ အာဟာရ ဗေဒပညာရှင်၊ မိခင်နို့တိုက်ကျွေး ခြင်း
ယခုနှစ် နေပြည်တော်သင်္ကြန်တွင် SKY NET ဖျော်ဖြေရေးမဏ္ဍပ်ကြီးအပါအဝင် ဖျော်ဖြေရေးမဏ္ဍပ်များနှင့် ရခို